त्रिनगर सीमा नाकाका प्रहरी सहायक निरीक्षक रमेश शाही मास्क प्रयोग नगरी हिँड्ने नागरिकलाई मास्क प्रयोग गराउनै मुस्किल भइरहेको बताउँछन्।...
सेगवेको घाँस काट्ने रोबोटमा जिपिएसको प्रयोग
सेगवेको रोबोट घाँस काट्ने मेसिनले तपाईकै बारीमा रहेर घाँस काटिरहन जिपिएस प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको छ । रोबोटको नाम नाभीमो रहेको छ । यसमा प्रयोगकर्ताले सीमा तार इन्स्टल गर्नु पर्दैन् र तपाईकै घरमै रहिरहन यसमा जिपिएस र अरु सेन्सर प्रयोग गरिएको हुन्छ । एक्ज्याक्ट फ्यूजन लोकेटिङ प्रणालीले नाभीमोलाई निर्धारित गरेको स्थानमा रहन दिन्छ । जिपिएिस सिग्नलमा केही समस्या आए पनि...
ICT Samachar 20 दिन पहिले
के सर्जिकल/मेडिकल मास्कलाई स्यानिटाइजर छर्केर पुन:प्रयोग गर्न मिल्छ?
सर्जिकल/मेडिकल मास्क एक पटकको प्रयोगको लागि मात्र बनाइएको हुन्छ त्यसैले सम्भव भएसम्म एक चोटि प्रयोग गरेपछि यस्ता मास्क पुन:प्रयोग गर्नु हुँदैन।
मैथिली विभागको अनलाइन कक्षाको सामग्री प्रयोग भएन
जनकपुरधाम – कोरोना संक्रमण फैलिएपछि अहिले वैकल्पिक साधनको प्रयोग गरी पठनपाठन सञ्चालन हुँदै आएको छ। निजी विद्यालय तथा क्याम्पसमा यसको प्रयोग गरी पठनपाठन भए पनि सरकारी स्कुल तथा क्याम्पसमा अझै पूर्णरूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन। जनकपुरधामस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस (राराब) भवनमा मैथिली विभागले अनलाइन कक्षाको लागि सामग्री खरिद गरे पनि […]
यसरी घरमै तयार गर्नुस् अनार र एलोभेराको हर्बल टोनर, यस्तो छ प्रयोग गर्ने
टोनर स्किन सफा गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले अनुहारको मृत छाला हटाउँदछ र स्किनलाई नरम बनाउँदछ । दैनिक टोनर प्रयोग गर्नुहोस्। यसले छालाको अधिक तेल सुकाउन मद्दत
गाउँपालिकाका सबै सवारी साधन संक्रमित बोक्न प्रयोग गरिने
बैतडी : जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिकाले आफूसँग रहेका सबै सवारी साधन कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा बिरामीको उपचारमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ।गाउँपालिकाले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चढ्ने गाडीसहित सबै सवारी साधन कोरोना नियन्त्रणमा प्रयोग गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ।गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्रबहादुर धामीका अनुसार गाउँपालिकामा एक एम्बुलेन्स, एक टिपर, एक बोलेरो जिप र एक कार छ।गाउँपालिकाले यसअघि संक्रमित बिरामी बोक्नको लागि एम्बुलेन्स मात्रै प्रयोग गरेको
मेयर र उपमेयर चढ्ने गाडी एम्बुलेन्स बनाएर कोरोना संक्रमितको सेवामा प्रयोग
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले प्रयोग गर्ने गाडी कोरोना संक्रमित बिरामी बोक्नका लागि प्रयोग गरिएको छ । नगर प्रमुख बाशुदेव घिमिरेले चढ्ने लु१ज ३६० र उपप्रमुख जागेश्वरदेवी चौधरीले चढ्ने लु१झ ३२६ नम्बरको स्कारपियोलाई एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको हो । ‘बिरामी एम्बुलेन्स नपाएर छ्टपटिँदा हामी गाडीमा चढ्नुभन्दा एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न लागेका हौं,’ नगर प्रमुख बाशुदेव घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘चालक पुरानै हुनेछन् । २४ घण्टामा जुनसुकै बेला संक्रमित बिरामीले फो...
कोरोना संक्रमण बढेसँगै हामीलाई आफ्नो शरीरमा अक्सिजनको स्तर के छ भनी चिन्ता बढेको छ । शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कति छ भनेर जाँच्नका लागि बजारमा एक उपकरण उपलब्ध छ, अक्सिमिटर । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? कहिले गर्ने ? यसबारे भने जानकारी हुन जरुरी छ । यससँगै के पनि जरुरी छ भने के तपाईंले यसको प्रयोग […]
सुर्खेत । कर्णालीको प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले मास्क प्रयोग नगर्नेलाई रु. १ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै सो निर्णय गरिएको जानकारी दिएको हो । यस्तै बिहान ६ बजे देखि ८ बजे सम्म दैनिक उपभोग्य पसल खुल्ने भएका छन् । कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको अवस्थामा दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक सामाग्रीका पसलहरु जस्तै खाद्यान्न, तरकारी, दुध र ग्यास पसल मात्र खुल्ला हुने भएका हुन् । उक्त, कार्य गर्
कोरोना संक्रमण बढेसँगै मास्कको प्रयोग पनि बढेको छ । पछिल्लो समय सबैका लागि मास्क अत्यावश्यक भइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नसरोस् भन्नका लागि कोरोना भाइरसका बिरामी साथै अन्य व्यक्तिहरुलाई पनि मास्क लगाउन भनेको थियो । अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी सबैले मास्क प्रयोग गरेर नै बिरामीको जाँच गर्छन् […]
नेपाल समाचारपत्र चैत्र २०७७
काठमाडौँ । कोरोना महामारी (कोभिड–१९)ले 'ह्यान्ड सेनिटाइजर’ प्रयोग गर्न सिकायो तर यसको प्रयोग गर्न नजान्दा त्यसले पार्ने असरका बारेमा सायदै हेक्का राख्ने गरिएको छ ।छालारोग विशेषज्ञ डा. मेलिना अमात्यले भनिन्, “कोरोना सङ्क्रमण मात्र नभएर विभिन्न सरुवा रोगबाट बच्न ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु राम्रो हो तर सेनिटाइजर प्रयोग कस्तो बेला गर्ने र कस्तो बेला नगर्ने भन्नेबारे भने निकै ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।”